Beosy - Wikipedia
Ny Beosy na Bôsy dia ilazana ny Vazimba nonina ao amin' ny Tsingin' i Bemaraha. Olona kely ray sady zeny izy ireo, mpihaza sy mpioty voan-javatra any anaty ala any afovoan-tanin' i Madagasikara. Tsy mitovy amin' ny Mikea izay mpihaza sy mpioty ary mpamboly any amin' ny tany iva a-morontsiraka izy ireo.
1 Ny fitenin' ny Beosy
2.3 Foko ara-tantara eto Madagasikara
Ny fitenin' ny BeosyHanova
Ny Beosy dia miteny amin' ny fitenim-paritra malagasy. Niezaka nanao izay hahitana ny mety ho sisa tamin' ny voambolan' ny Vazimba tao amin' ny fitenin' ny Beosy i Blench sy Walsh araka ny soratra navoakan' izy ireo tamin' ny taona 2009. Tsapa fa betsaka dia betsaka ny voambolana izay tsy hita amin' ny fitenim-paritra malagasy hafa, izay betsaka noho ny hita ao amin' ny fiteny malagasin' ny Mikea sady mety ho ny sisa tamin' ny fototry ny fitenin' ny Vazimba raha mitaha amin 'ny fitenin' ny Mikea, raha toa ka misy tokoa izany. Mihasarotra ny mety ho fisian' izany vokatry ny fampiasan' ny Beosy be loatra ny fitenenana iniana atao mba tsy hahafantaran' ny olon-kafa izay lazainy.
Ny foko eto MadagasikaraHanova
Ny vahoaka hafa eto MadagasikaraHanova
Foko ara-tantara eto MadagasikaraHanova
↑ Blench & Walsh, 2009 draft ms, "The vocabularies of Vazimba and Beosi: do they represent the languages of the pre-Austronesian populations of Madagascar?".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Beosy&oldid=1010996"
Dernière modification le 24 Aprily 2021, à 12:40
Voaova farany tamin'ny 24 Aprily 2021 amin'ny 12:40 ity pejy ity.